China Umdwebo weHSS inyathelo lokuqhuba i-12mm x 20mm abavelisi kunye nabathengisi Mingtaishun
Izinto eziphathekayo: Intonga ye-carbide efanelekileyo kunye ne-45 55 okanye i-65HRC
Ukwaleka: AlTiN / TiSiN / AlTiSiN / TiN / ngaphandle kokutyabeka, zonke ziyafumaneka Inqaku: Ukulungele ukubola umngxunya wenyathelo ngaxeshanye
Velisa ngokwemizobo yakho okanye iiparameter ezineenkcukacha ezidweliswe apha ngezantsi
HSS Inyathelo uqheliso
Ukubhola ngokukhawuleza kwesinyithi kunye neeplastiki. Ukusetyenziswa kwamandla okuziqhelanisa ne-13mm chuck.
Iimpawu zeHSS zokugrumba
Inika imingxunya ecacileyo kwizicelo ezifuna ukunyuswa kobungakanani bemingxunya encinci
Akukho mngxuma wokulinga ufuna ukwandisa ngokulula imingxunya esele ikhona
Ukulungele ukusetyenziswa kunye namandla amaninzi
Amanqwanqwa okunyathela amanyathelo asetyenziswa ngombane, imibhobho kunye nokusetyenziswa kwe-HVAC. Zisetyenziselwa ukubhola imingxunya emininzi ngaphandle kwemfuneko yokutshintsha ubukhulu bezinto. Ziyahambelana nezixhobo zombane ezinentambo okanye ezingenazintambo.
Kutheni ungayithenga inyathelo lokuqhuba?
Isinyathelo sokuprinta sisiqwengana esinye sezixhobo ezinama-angles alungiselelwe ifluti. Inika uyilo olukhethekileyo lwencam olushenxisa intshukumo kunye nokwandisa isantya sokomba. Ziyahambelana naso nasiphi na isixhobo samandla esidibanisa i-chuck, umzekelo; ii-drill ezingenazintambo
Nguwuphi umba oza kugqobhoza kuwo?
Izinto eziqhelekileyo zibandakanya:
Kulungile njani ukubhola inyathelo?
Inyathelo lokuprakthiza kukufumana into engahoywanga, umgaqo osebenzayo ulula kakhulu unokubhola imingxunya yesayizi emininzi ngaphandle kokutshintsha isuntswana kwaye uphumelele ukugqiba okucocekileyo ngalo lonke ixesha.
Ngaba inyathelo lokugrumba lisetyenziswe ngomatshini wokumisa omileyo?
Ewe, inyathelo lokomba iibrit ziyahambelana nezixhobo zamandla eziphathwayo kunye noomatshini bokumisa abemi.
HSS Inyathelo lokuqhuba iBit
Uhlobo lwe-Drill Bit Inyathelo lokuqhuba iBit
Inani leeNyathelo 9
Izinto eziphathekayo HSS
Ubuncinci beNtloko 12mm
Ubukhulu beNtloko 20mm
Egqithileyo Ubungakanani beMetriki Inyathelo lokuqhuba ifluti ethe ngqo
Okulandelayo: I-Flute Spill Step Drill, 7/8 kunye no-1-1 / 8
Inyathelo lokuqhuba iBit